ကြုံခဲ့ရ နဗနဘ၀: 39.4 လင်ဇီးမုန်တိုင်း မွှေတဲ့နေ့ ( အပိုင်းတစ် )
လင်ဇီး မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာ ကျောင်းအပြီး အိမ်ပြန်ပါသွားတော့ မေမေက ဆင်ချီးတုံးဆပ်ပြာနဲ့မှားပြီး အိုးတိုက်ပစ်တာ သတိရတယ်..။
တားဗျို့ ခင်ဗျားမဒမ် အလိမ်ခံရလိမ့်မယ်
အဲဒီလို အလုပ်မျိုး တခဏလောက်လုပ်ဖူးတယ်၊ နောက်တော့ စိတ်မသန့်လို့ ပြန်ထွက်လိုက်တယ်။
လင်ဇီးကိုစကြားဖူးကတည်းက လိမ်စဉ်တွေဆိုတာ သိနေတယ်ဗျ။ သူတို့လင်ဇီးက AIDS ပါပျောက်တယ်၊ Cancer လဲ အမြစ်ပြတ်အောင် ကုနိုင်တယ်လို့ ကြားကတည်းက လိမ်စဉ်တွေဆိုတာ သိလိုက်ပြီ။
Thanks for your post. I was told byaBurmese woman who has spent 10 Laks on linzi and now she is regretting.
အမလေး သူတို့က ဆေးလို့ မပြောရဲဘူး ။
ဒါနဲ့ ဆေးလို့ မကျေညာရဲတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘယ်လိုလုပ် ရောဂါ ပျောက်ပါ့မလဲ မေးလို့လေ ကံကောင်းလို့ အဲဒီအိမ်ပေါ်က ဆင်းမပြေးရတယ်။
လင်ဇီးရဲ့ ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ နံမည်တမျိုးကတော့ လိမ်ကြည့်ပါတဲ့ခင်ဗျား။
I also agree ur post. All are liers. I m not sure why Myanmar ppl are easy to be cheated. They really cannot think it's true or not OR they want to do because of money even though they know Linzi Group is 420.
For me, listen their explanation only one time is enough to know they are liers. I hate Myanmar ppl who has no brain.
Can feedback me if u have different pt of view.. thanks..
အမလေး မအယ်အဒေါ်တော့ လင်ဇီးလုပ်လိုက်တာ စီးပွားပြုတ်ပြီး ရူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ။
ခုလည်း တရားထိုင်တယ်။ သူ့ ကိုယ်သူ တရားပေါက်နေပြီတဲ့။
တရားထိုင်ရင်း လူတစ်ယောက်က အိမ်တစ်ခန်းကို ဘုမသိဘမသိ လာပေးသွားတာ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းလည်း အလကားရတယ်တဲ့။
ဟုတ်..ကျွန်တော်လည်း အဲဒါတွေ ကြုံဖူးတယ်
ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်လို့ကင်းကင်းဘဲနေတယ်ဗျ
နောက်ထပ်အဲဒီလို ကုမ္ပဏီတွေလည်း ရှိသေးတယ်
ရှင်းရှင်းလေးပါ ကာကွယ်ချင်ယင်ဓါတ်စာသုံး ရောဂါပျောက်ချင်ယင်ဆေးကိုသုံးလေ